[25 / 10 / 2019] Xarunt Kardemir R&D waxaa iska diiwaangaliyay Wasaaradda Warshadaha iyo Tiknolojiyadda	78 Karabuk
[25 / 10 / 2019] Dalxiisyada Xayawaanka Lakes Express ayaa bilaabmay	32 Isparta
[25 / 10 / 2019] Summit Sumcadda Shirkii Wadooyinka Tareenka ee Bartamaha Aasiya	06 Ankara
[25 / 10 / 2019] Gaziray Wuxuu Dhamaaday Boqolkiiba 99	27 Gaziantep
[25 / 10 / 2019] Tareenka Xawaaraha Sare Teknosab wuxuu ku fidin doonaa Karacabey iyo Bandırma ..!	16 Bursa
[25 / 10 / 2019] Basas Koronto oo Cusub oo Riyo Gaaraya Van	65 Van
[25 / 10 / 2019] Aydın Denizli Double Line Railway wuxuu ka bilaabmayaa 2020	09 Aydin
[25 / 10 / 2019] Wasiirka Fatih Dönmez oo jooga TÜVASAŞ Booth	54 Sakarya
[25 / 10 / 2019] Wasiir kuxigeenka Büyükdede ayaa booqday TÜVASAŞ	54 Sakarya
[25 / 10 / 2019] 'Tareenka oo dhex mara: Haydarpaşa' Bandhig Sawiro	34 Istanbul
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraSaacadaha Tareenka Xawaaraha Sare
18 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 06 Ankara, 26 Eskisehir, 34 Istanbul, 42 Konya, Gobolka Central Anatolia, tareenka, GUUD, Tareenka dhakhso ah, Khariidadaha, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY 0
waqtiyada tababarka dhakhso ah
2019 Qiimaha Tikidhada Xawaaraha Sare ee hadda ah Yadoo Jadwallada Waqtiga iyo Waqtiga: Tareenada xawaaraha sare leh ee nolosheena u fududeeya gaadiidka is-dhexgalka waxay sii wadaan isku xirka magaalooyinka kala duwan, rakaabka iyo dhaqamada. Tareeno xawaare sare leh oo u adeega magaalooyin kala duwan oo leh astaamo safar oo kaladuwan iyo noocyo wagon ayaa loo diyaariyey si weyn oo leh astaamo farsamo sare. Gaadiidka TCDD waxay ku siineysaa fursad safar oo aan la dafiri karin iyadoo lagu biirinayo dhammaan hal-abuurnimada iyo horumarka tikniyoolajiyada ee sida ugu dhakhsaha badan.
16 Luulyo Tareenka Xawaaraha Sare ee ka imanaya 2019 (YHT)
Tareenka Xawaaraha Sare ee Ankara Istanbul, Ankara Dammaanadda 6 Shaqeeyaan. Tareenka xawaaraha dheereeya ee Ankara-Istanbul ee ka tagaya Ankara wuxuu joogsanayaa Sincan, Polatlı, Eskişehir, Bozüyük, Bilecik, Arifiye, İzmit iyo Gebze wuxuu joogaa wuxuuna imaanayaa Pendik qiyaastii 4 saacadood iyo daqiiqadaha 15. Ankara-Istanbul Tareenka xawaaraha sare ku socda kuma istaago joogsiga qaar waqtiyada qaar ee imaatinka tareenka waxaa dhici kara kala duwanaansho.
Tareenka Xawaaraha Sare ee Istanbul-Ankara wuxuu ka shaqeeyaa maalin kasta 6 u dhaxeeya Istanbul-Ankara iyo Ankara-Istanbul. Tareenka ka soo baxaya Istanbul Pendik wuxuu imanayaa Ankara iyadoo loo marayo Gebze, Izmit, Arifiye, Bilecik, Bozuyuk, Eskisehir, Polatli iyo Sincan siday u kala horeeyaan 4 daqiiqo 15. Maaddaama tareenka xawaaraha sare ee Istanbul-tareenka uusan joogsanaynin meelo kala duwan, waxaa laga yaabaa in uu jiro isbeddel waqtigii tareenka.
Tareenka Xawaaraha Sare ee Ankara Eskişehir Eskişehir waa mid ka mid ah istaagida khadka tareenka Ankara. Waa suurtagal in lagu sameeyo safarada 5 safkan. Intaa waxaa dheer, waxaa sidoo kale jira khadka Ankara Eskişehir. Qadka Tareenka Sare ee Ankara Eskişehir, oo ka mid ah duullimaadyada 6, wuxuu sameeyaa duullimaadyada 11 maalin kasta. Maaddaama waqtigan uu yahay mid ku-meel-gaadh ah, ma jiro wil weel cunto ah oo ku dhex jira. Maadaama saldhigyada tareenadu ku yaal magaalada, safarka u dhexeeya Ankara iyo Eskişehir wuxuu qaataa ku dhawaad ​​1,5 saacadood. Halkii aad ku safri lahayd tareenkan, waxaad sidoo kale dooran kartaa khadka Anlara-Istanbul. Laba ayaa gudbaya isla joogsiga.
Tareenka Xawaaraha Sare ee Eskişehir-Ankara Eskişehir waa mid kamid ah istaagida khadka toosan ee İstanbul Line. Waa suurtagal in lagu sameeyo safarada 5 safkan. Intaa waxaa dheer, waxaa sidoo kale jira khadka Eskişehir Ankara. Qadka Tareenka Sare ee Eskisehir Ankara, oo ka mid ah safarada 6, wuxuu sameeyaa safarada 11 maalin kasta. Maaddaama waqtigan uu yahay mid ku-meel-gaadh ah, ma jiro wil weel cunto ah oo ku dhex jira. Maaddaama saldhigyada tareenadu ay ku sugan yihiin magaalada, markan waxay siisaa rakaabka wax ku ool ah. Safarku wuxuu qaadanayaa celcelis ahaan saacadaha 1,5.
Tareenka Xawaaraha Sare ee Ankara Konya wuxuu socdaa maalin walba. Celceliska muddada socdaaladan waa saacadaha 7 iyo 1 daqiiqo. Sincan iyo Polatli ayaa joogsanaya. Waxaa jira laba ikhtiyaar oo tigidhada ah, kuwan waa kuwa jaangooyooyin ah oo dabacsan. Nooca tareenka xawaaraha sare leh ee 55 waxaa ku jira hal xero dhallinta xaraashka ah ee 2 + 2 iyo 2 + 2 meheradda hoose ee ganacsiga. Waqtigani waa mid gaagaaban, sidaa daraadeed ma jiro gaari gaagaaban oo cunto leh.
Tareenka Xawaaraha Sare ee Konya-Ankara wuxuu socdaa maalin walba. Celceliska muddada socdaaladan waa saacadaha 7 iyo 1 daqiiqo. Polatlı iyo Sincan ayaa joogsanaya. Waxaa jira laba ikhtiyaar oo tigidhada ah, kuwan waa kuwa jaangooyooyin ah oo dabacsan. Nooca tareenka xawaaraha sare leh ee 55 waxaa ku jira hal xero dhallinta xaraashka ah ee 2 + 2 iyo 2 + 2 meheradda hoose ee ganacsiga. Waqtigani waa mid gaagaaban, sidaa daraadeed ma jiro gaari gaagaaban oo cunto leh.
Tareenka Xawaaraha Sare ee Konya-Istanbul wuxuu fuliyaa duullimaadyada 2 maalin kasta. Jidka ugu dambeeya ee tareenka waa Istanbul Pendik. Waqtiga celceliska safarka waa saacadaha 4 iyo 20 daqiiqo. Jidadka tareenka Konya-Istanbul ayaa u kala horreeya Eskisehir, Bozuyuk, Bilecik, Arifiye, Izmit iyo Gebze. Waad iibsan kartaa duullimaadyo leh laba ikhtiyaar oo tikidhada caadiga ah oo dabacsan iyo noocyo kala duwan oo nooca xNUMX ah. Tareenka waxaa ku jira dhaqaalaha pulman, ganacsiga pulman, gaari-gacmeedka ganacsiga pulman oo ay la socdaan raashin.
Tareenka Xawaaraha Sare ee Istanbul Konya wuxuu socodsiiyaa 2 maalin kasta. Jidka ugu dambeeya ee tareenka waa Konya. Tareenka wuxuu dhameystiraa waqtiga safarka celcelis ahaan saacadda 4 saac 20 daqiiqo. Tareenka Xawaaraha Sare ee Istanbul-Konya wuxuu maraa Gebze, Izmit, Arifiye, Bilecik, Bozuyuk, Eskisehir saldhigyada. Waad iibsan kartaa duullimaadyo leh laba ikhtiyaar oo tikidhada caadiga ah oo dabacsan iyo noocyo kala duwan oo nooca xNUMX ah. Tareenka waxaa ku jira dhaqaalaha pulman, ganacsiga pulman, gaari-gacmeedka ganacsiga pulman oo ay la socdaan raashin. Qiimaha tikidhada tareenka waxay ku kala duwan yihiin noocyada gaariga.
Hordhac Tareenka Xawaaraha Sare
Qiimaha Tikidhada Sare iyo Saacadaha Xawaaraha Sare-dheer 18 / 11 / 2013 Qiimaha Tigreega iyo Saacadaha Xawaarida Xawaaraha Sare: Tareen tareen dheere ah oo u dhexeeya Eskisehir iyo Ankara oo ka shaqeynaya 16.35 ka soo jeeda Eskisehir ayaa la geeyaa maxkamad bilo ah oo ah 1 ee Polatli. Haddii ay jiraan rakaab ku filan, waxaa jiri doona joogsi joogto ah. Qiimaha Tigidhka Sare Heerka waa 25 TL 12 waa ka yar tahay 12.5. Carruurta da'doodu ka yar tahay 7 waxay geli kartaa qoyska iyada oo aan tigidh la siin. Qiimaha Internetku waa 35 iyo 17.5 TL. Waxaad tigidhada ku iibsan kartaa internetka adiga oo riixaya batoonka tikidhada sare. Tareenka Tareenka: waxaa lagu wici karaa telefoon. Laakiin haddii aad ka fekereyso inaad ballansatid, waxaad u baahan tahay xubin. TCDD - Shaashadda Diiwaangelinta Isticmaalka Internet-ka ah ee xubinimada xubinimada
Xiriirinta tareenada Eskisehir ilaa Afyon iyo Kütahya 02 / 09 / 2012 ESKISEHIR ka-xawaaraha sare Tababar AFYON TARIINKA XIDHIIDHKA tareen 71622 Noli Eskişehir K: 17.45 ipium V: 20.59 71621 Noli Tareen ipium K: 07.20 Eskisehir V: 10.50 ESKISEHIR ka-xawaaraha sare Tababar KUTAHYA TARIINKA XIDHIIDHKA Eskisehir K: 09.00 Kutahya V : 10.16 Eskisehir K: 13.00 Kütahya V: 14.15 Eskisehir K: 19.50 Tavsanlı V: 21.58 Tavsanlı K: 06.40 Eskisehir V: 08.48 Kutahya K: 11.10 Eskisehir V: 12.28 Kutahya K: 17.15 Eskisehir V: 18.32
Tareenka Xawaaraha Sare ee Ankara ilaa Konya 04 / 12 / 2012 From Ankara - Ankara, Ankara ee - - Konya High Speed ​​Tareen YHT ka Konya daawanaya Konya YHT-time processing of-xawaaraha sare ee waqti yimid tareen, jadwalka bixitaanka wakhtiga bixitaanka tareen YHT-xawaaraha ee wax ku ool ah ka January 17.08.2012; From Ankara - Konya - Konya ka - si Ankara shaqeynaya-xawaaraha sare ee tareenka YHT tareen iyo Departure - shaxda waqti Imaanshaha (arrimaha maalin walba waa Isniin, Talaado, Arbaco, Khamiis, Jimce, Sabti iyo Axad) Hz. Mevlana Xaflada xuska jira ay sabab u tahay Vuslat SEB 08, 09, 14, 15, 16 December 2012 08.16 laga bilaabo taariikhda Ankara, Konya From 19.05 ah, ayaa sidoo kale ka Ankara on 17.12.2012 08.16, 23.30 ka Konya in ...
Saacadaha Tareenka Xawaaraha Sare 25 / 12 / 2012 Xilliyada Tababarka Xawaaraha Sare waa kuwo sax ah oo ka socda 17.08.2012; TALOOYIN KA CUSUB OO KU SAABSAN ANKARA - KONYA - ANKARA Sincan F: 07.00 Sincan F: 08.52) Ankara KIM: 07.24 Konya V:. 09.35 (Xinjiang-Polatlı ha joojin) Ankara K: 11.30 Konya V: 09.59 (Sincan F: 10.19 Polatlı ha joojin) Ankara K:. 11.30- Konya V: 13.20 (Sincan F: 13.00: 14.52 Polatlı ha joojin.) Ankara K: 13.24 Konya V: 15.15 (. Xinjiang-Polatlı ha joojin) Ankara K: 17.07 Konya V: 15 (Sincan F: 39 Sincan F: 17.15) Ankara KIM: 19.05 Konya V: 18.30 (Sincan F: Sincan F 20.25: 18.54) ka SAACADAHA DEPARTURE Konya Konya K: 19.14 Ankara-V: 20.45 (Polatlı ...
Xarunt Kardemir R&D waxaa iska diiwaangaliyay Wasaaradda Warshadaha iyo Tiknolojiyadda
Diyaarinta Wadada Isku Xirta Buundada Mevlana
Nadiifinta Shaqada Nadiifinta Baska Demoqraadiyada ee 15 Luulyo
Tareenka Xawaaraha Sare Teknosab wuxuu ku fidin doonaa Karacabey iyo Bandırma ..!
Sahin, si deg deg ah xal loogu helo dhibaatooyinka!
29 ee Gaadiidka Bursa ee Oktoobar 1 Kurus
29 ee Gaadiidka Dadweynaha ee Ankara waxay noqon doontaa bilaash bisha Oktoobar!
İzmir Harbor Quay iyo Buuxinta Waxyaabaha Qarxay
Xiriirinta tareenada Eskisehir ilaa Afyon iyo Kütahya
Eskisehir Konya Eskisehir Tareenka iyo qiimaha Tikidhada
Xilliyada imaatinka gawaarida xawaaraha sare
Maanta in History: tareenka October 23 1978 Turkey-Suuriya-Ciraaq ...
Maanta Taariikh: 22 Oktoobar 2017 ee Kahramanmaraş Türkoğlu
News Archive Xulo bisha Oktoobar 2019 (490) Sebtembar 2019 (555) August 2019 (508) July 2019 (633) Juun 2019 (504) May 2019 (526) Abriil 2019 (418) Maarso 2019 (521) Febraayo 2019 (483) Janaayo 2019 (502) Range 2018 (620) Nofeembar 2018 (504) Oktoobar 2018 (435) Sebtembar 2018 (517) August 2018 (486) July 2018 (506) Juun 2018 (581) May 2018 (467) Abriil 2018 (545) Maarso 2018 (554) Febraayo 2018 (500) Janaayo 2018 (557) Range 2017 (509) Nofeembar 2017 (427) Oktoobar 2017 (538) Sebtembar 2017 (455) August 2017 (505) July 2017 (479) Juun 2017 (477) May 2017 (493) Abriil 2017 (434) Maarso 2017 (540) Febraayo 2017 (477) Janaayo 2017 (538) Range 2016 (487) Nofeembar 2016 (631) Oktoobar 2016 (657) Sebtembar 2016 (542) August 2016 (608) July 2016 (485) Juun 2016 (661) May 2016 (664) Abriil 2016 (700) Maarso 2016 (804) Febraayo 2016 (855) Janaayo 2016 (751) Range 2015 (799) Nofeembar 2015 (640) Oktoobar 2015 (624) Sebtembar 2015 (428) August 2015 (493) July 2015 (505) Juun 2015 (535) May 2015 (577) Abriil 2015 (622) Maarso 2015 (1017) Febraayo 2015 (878) Janaayo 2015 (1077) Range 2014 (963) Nofeembar 2014 (826) Oktoobar 2014 (771) Sebtembar 2014 (598) August 2014 (808) July 2014 (911) Juun 2014 (735) May 2014 (957) Abriil 2014 (972) Maarso 2014 (864) Febraayo 2014 (720) Janaayo 2014 (733) Range 2013 (664) Nofeembar 2013 (656) Oktoobar 2013 (548) Sebtembar 2013 (570) August 2013 (533) July 2013 (661) Juun 2013 (577) May 2013 (734) Abriil 2013 (1059) Maarso 2013 (1102) Febraayo 2013 (811) Janaayo 2013 (906) Range 2012 (911) Nofeembar 2012 (1168) Oktoobar 2012 (830) Sebtembar 2012 (886) August 2012 (974) July 2012 (863) Juun 2012 (591) May 2012 (445) Abriil 2012 (563) Maarso 2012 (699) Febraayo 2012 (546) Janaayo 2012 (417) Range 2011 (149) Nofeembar 2011 (35) Oktoobar 2011 (23) Sebtembar 2011 (18) August 2011 (25) July 2011 (18) Juun 2011 (16) May 2011 (13) Abriil 2011 (13) Maarso 2011 (33) Febraayo 2011 (24) Janaayo 2011 (13) Range 2010 (335) Nofeembar 2010 (12) Oktoobar 2010 (15) Sebtembar 2010 (12) August 2010 (16) July 2010 (9) Juun 2010 (19) May 2010 (6) Abriil 2010 (3) Maarso 2010 (62) Febraayo 2010 (303) Janaayo 2010 (1838) Range 2009 (4) Nofeembar 2009 (1) Oktoobar 2009 (3) Sebtembar 2009 (3) August 2009 (2) Juun 2009 (3) May 2009 (2) Abriil 2009 (3) Maarso 2009 (9) Febraayo 2009 (4) Janaayo 2009 (3) Nofeembar 2008 (1) Oktoobar 2008 (1) Sebtembar 2008 (2) August 2008 (1) July 2008 (2) Juun 2008 (2) May 2008 (2) Abriil 2008 (1) Maarso 2008 (3) Febraayo 2008 (5) Janaayo 2008 (2) Range 2007 (2) Oktoobar 2007 (2) July 2007 (1) May 2007 (1) Abriil 2007 (1) Febraayo 2007 (2) Janaayo 2007 (1) Range 2006 (1) Oktoobar 2006 (3) August 2006 (1) Juun 2006 (2) May 2006 (2) Abriil 2006 (2) Maarso 2006 (2) Nofeembar 2005 (2) August 2005 (1) Juun 2005 (1) Maarso 2005 (2) Febraayo 2005 (1) Janaayo 2005 (1) Range 2004 (1) Oktoobar 2004 (3) July 2004 (1) May 2004 (2) Range 2003 (1) Oktoobar 2003 (1) May 2003 (1) Maarso 2003 (1) Febraayo 2003 (1) Janaayo 2003 (1) Range 2002 (1) Oktoobar 2002 (4) August 2002 (1) Abriil 2002 (1) Maarso 2002 (2) Janaayo 2002 (2) July 2001 (1) Juun 2001 (1) Maarso 2001 (1) May 2000 (3) Maarso 1999 (1) Oktoobar 1998 (2) Maarso 1998 (1) August 1997 (1) Oktoobar 1996 (1) August 1996 (2) May 1995 (1) August 1992 (1) May 1990 (1)